समाचार Archives - NepalLook
सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी मधुकुमार मरासिनीलाई दिएको छ । मरासिनी यसअघि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा थिए । अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा तानिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ । यस अघि नै स्वास्थ्य सचिवमा डा.रोशन पोखरेलले जिम्मेवारी पाइसक्नु...
मेलम्चीमा एक महिना अगाडि आएको बाढीले धेरै धनजनको क्षति ग¥यो । आँखै अगाडि आफ्नो जीवनभरको सम्पति तथा सुन्दर सपना बाढीले बगाएर लग्यो । सुन्दर मेलम्ची अहिले खण्डहर भएको छ । कतिको घरको जगसँगै बगाएर लग्यो भने कतिको घरलाई बस्नै नमिल्नेगरी क्षति पु¥यायो । मेलम्ची नगरपालिकाको करिव ४ वर्षको विकासका काम...
अहिले देशभरी हल्कादेखि भारी वर्षा भइराखेको छ । ठाउँ ठाउँमा बाढी र पहिरो गइराखेको छ । जनजीवन कष्टकर छ । तर, विपद् व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न संयन्त्र तथा संघसंस्थाले काम गरिराखेका छन्...
काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को असार मसान्तसम्ममा सरकारले लिएको लक्ष्यको ९३ प्रतिशत कर संकलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार आजसम्म ८ खर्ब ५२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको हो। चालू आवमा ९ खर्ब १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। ...
काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि सरकारले काठमाडौंँ उपत्यका लगायत अन्य जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको बुधबार १४ दिन पूरा भएको छ । निषेधाज्ञा जारी भएको दुई साता पूरा भइसक्दा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मापदण्ड अझ कडाइ नगरे स्थिति नियन्त्रणमा लिन कठिन हुने विज्ञहरूको सुझाव छ । वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट तथा...
प्राकृतिक विपद्को सामना : राष्ट्रिय नारा र नवीन कार्ययोजनासहित अघि बढौं: केपी शर्मा ओली
मुलुकका विभिन्न भाग यतिबेला डढेलो र आगलागीको चपेटाले आक्रान्त छन् । यस्ता विभिन्न प्राकृतिक विपद्हरू हामीकहाँ आइरहन्छन् । हामीले सकेसम्म यिनको स्थायी समाधान खोज्ने बाटो अबलम्वन गर्नुपर्छ । यसमा तत्कालका लागि उद्दार, राहत, पुनःबसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘निरोगी नेपाल’ लाई मूल नीति भनेजस्तै...
भवन संहिता कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? के भन्छन् सरोकारवाला निकाय ? भिडियोमा हेरौं